Dezie YouTube Files dị iche iche na YouTube Video Editors
2 YouTube Video edezi Software & égwu
3 Dezie YouTube Video
3.4 ngwa Motion
Kasị videos uploaded YouTube na-mere na-enwechaghị ahụmahụ ka m na gị, na-emekarị na obi umeala video Ndinam akụrụngwa. N'ihi ya, ọ bụ ihe ọ bụla ihe ijuanya na ị ga-chọta a otutu nke videos kọrọ àgwà na ọdịnaya. Ọ bụrụ na ị ga-achọ ka ụfọdụ mgbanwe gị YouTube videos, isiokwu a bụ nri maka gị. Ebe ị ga-amụta otú dezie YouTube faịlụ site na iji dị iche iche ngwaọrụ.
Nkebi nke 1: Dezie YouTube Videos na Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor)
Part 2: Dezie YouTube Videos na YouTube Video Editor
1. Ị dekọrọ a n'ezie fun video na-achọ ịkọrọ ya na ndị enyi na YouTube, ma mkpa iji wepụ akpan akpan idaha, akuku nwa n'ọnụ, tinye ndepụta okwu ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ibe n'ibe tupu oge eruo. Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor) - a ọkachamara na Njirimara ọgaranya edezi ngwá ọrụ ukwuu tụrụ aro.
2. Ma eleghị anya, otu onye na-idaha ke a video n'ezie ewute gị na ị na-achọ ime ya, ma ọ bụ i h Ekele nchepụta na ịnụ ọkụ n'obi itinyekwu video mmetụta dị ka PIP, ihu anya, ima elu Cut na ndị ọzọ. Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor) enyere gị aka mfe mma gị video ole na ole clicks.
Soro n'okpuru ndu dezie YouTube faịlụ rụọ ọrụ nke ọma. Ọ bụrụ na ị bụ onye na Mac onye ọrụ, na-echigharịkwuru Mac Video Editor maka enyemaka.
Nzọụkwụ 1. Import YouTube faịlụ ka video nchịkọta akụkọ
Wụnye na ẹkedori video nchịkọta akụkọ, wee pịa "Import" ma ọ bụ ịdọrọ YouTube videos ị chọrọ dezie n'ime usoro ihe omume. Niile faịlụ a ga-emere na onye ọrụ Album. Ị nwere ike idozi faịlụ site aha, oge ma ọ bụ ụdị. Mgbe ị na-Michael faịlụ, ị pụrụ snapshots nke ọkacha mmasị gị Mpaghara kpam kpam.
Nzọụkwụ 2. Kpaa ma ọ bụ kewaa YouTube videos
Chetara video na usoro iheomume, na òké n'elu ya mmalite ma ọ bụ agwụcha ebe. Mgbe "Ugboro abụọ akụ" na-egosi, ịdọrọ ya ka ebelata ma ọ bụ ịgbatị clip. Iji weghachite ọ bụla trimmed okpokolo agba, dị nnọọ pịa "Ctrl + Z" ma ọ bụ pịa "Ghaa" button.
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe n'etiti akụkụ nke gị YouTube video, na-agbalị Split ọrụ kama. Ọ bụ nnọọ mfe. Dị egwu gị YouTube video, Bugharịa ihe mmịfe gị chọrọ ọnọdụ, na pịa "kwụsịtụ". Ugbu a pịa Mkpa na akara ngosi na toolbar ka ha kee ya n'ime abụọ n'akụkụ ozugbo. Ikwugharị a ruo mgbe ị ga-esi gị chọrọ akụkụ, mgbe ahụ kụrụ "Hichapụ" na keyboard wepụ ndị ọzọ.
Nzọụkwụ 3. Jikọọ YouTube videos
Ịdọrọ kwukwara YouTube faịlụ site na gị album ka usoro iheomume na ala otu otu. Rịba ama na ị ga-ndokwa ha na usoro iheomume dị ka play iji. Na adịghị ịdọrọ otu faịlụ ọzọ faịlụ, ma ọ bụ ị ga-kewaa ya. Iji mma ndokwa ọtụtụ YouTube faịlụ na-enweghị overlapping, ị pụrụ iji ihe mmịfe mmanya ịkwaga faịlụ. Mgbe ị na arụchaala ọrụ, dị nnọọ pịa Play bọtịnụ na Preview window ele mmetụta na ozugbo.
Nzọụkwụ 4. n'Ubi YouTube videos
Chetara video na usoro iheomume, nri pịa ya ma họrọ "n'Ubi" iji nweta akuku window. Nke a window bụ a abụọ-window dialog, ime ka ị tụnyere ezigbo oge mmetụta na ala. Na ala submenu, ị nwere 3 nhọrọ ịrịọ video. Họrọ 16: 9 ma ọ bụ 4: 3, nke mere na i nwere ike inwe gị chọrọ etiti size mgbe ọ ka na-edebe nri akụkụ ruru. Alternatively, họrọ Iji aka, i nwere ike ịdọrọ marquee ka ọ bụla etiti size video. Ọ bụrụ na ihe ọ bụla emehie ime, nanị pịa "Tọgharia" button iji weghachite site ọkọ.
Nzọụkwụ 5. Tinye ọzọ mmetụta ka YouTube videos
I nwekwara ike ide video mmetụta gị YouTube video faịlụ. Dị nnọọ na-aga dị iche iche na taabụ n'elu usoro iheomume na-ahọrọ mmetụta ị chọrọ ka ịgbakwunye. Iche iche iche iche nke edezi mmetụta dị ka mgbanwe, Intro / akwụmụgwọ, Mozis, tilt nnofega, na-eche ihu anya, na-awụlikwa elu bee na kwaa na-nyere.
Nzọụkwụ 6. Share dezie YouTube video
Mgbe edezi, pịa "Mepụta" ma họrọ "YouTube", mgbe ọsọ ọsọ na akaụntụ gị na paswọọdụ wee na i nwere ike ịkọrọ gị dezie video on YouTube mfe. I nwekwara ike ịzọpụta videos na video format ị na-ahọrọ ma ọ bụ na-kachasị videos n'ihi na gị iPhone, iPad, iPod, PSP, Wii, wdg Ke adianade do, ị nwere ike ọkụ gị vidiyo na DVD discs n'ihi na mma video ichebe.
Video Tutorial: Olee dezie YouTube Videos
Nkebi nke 2: Dezie YouTube Videos na YouTube Video Editor
1. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na customizing na ime gị onwe gị YouTube videos, ị ga-mkpa iji a video nchịkọta akụkọ. Ezie na e nwere ọtụtụ ndị magburu onwe standalone ngwa si ​​n'ebe, bara uru online ngwá ọrụ dị ka ndị YouTube Video Editor mgbe niile na-eme ka ọrụ mfe.
2. Chọta ọtụtụ narị Creative Commons vidiyo na ọdịyo tracks na-nwebisiinka free on YouTube na chọrọ iji ha ike ọhụrụ video? Na-awụlikwa elu n'elu ka YouTube Video Editor ka ojiji nke ndị a ego ugbu a.
Ịmụta otú dezie YouTube video na YouTube Video Editor, biko ego ndị nduzi maka nkọwa ndị ọzọ >>
Olee ka jikota / Ikpokọta / Jikọọ YouTube (FLV) Videos
Olee otú bugharia YouTube (FLV) Videos
> Resource> YouTube> Olee dezie YouTube Files dị iche iche na YouTube Video Editors